♪ “Huawei G9 Plus” ♫ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
မြန်မာလို IT ebook
နည်းပညာ Ebook များ
Window Loader များ
Internet Browser နှင့် မြန်မာစာ
နေ့စဉ် Pemium Accounts များ
IDM ကို အင်စတောလ် ပြုလုပ်နည်း
ဘာမှ ထပ်လုပ်ပေးစရာမလိုသော IDM 6.7 Build 11
Youtube မှ ဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်နည်း
Gtalk နှင့် မြန်မာစာ ပြဿနာ
Video Editing ဆော့ဝဲလ်များ
Android ဖုံး နှင့် မြန်မာ Font
♪ “Huawei G9 Plus” ♫
Tuesday, September 06, 2016 Pyae Phyo (MMiTD) No comments
Huawei ကနေ ယခုသြဂုတ်လအတွင်းမှာ မိတ်ဆက်ပေးသွားမယ့် Huawei G9 Plus စမတ်ဖုန်းဟာ ဒီဇိုင်းပုံစံရှင်းလင်းလှပခေတ်မီမှုရှိတဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကို အဖြူရောင်၊ အမည်းရောင်နဲ့ ရွှေရောင်ဆိုပြီး အရောင်(၃)မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးသွားမှာပါ။
သုံးစွဲနိုင်မယ့် Networks တွေက GSM, HSPA နဲ့ LTE Network တွေပဲဖြစ်ပြီး Nano SIM Card2Card ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထည့်သွင်းသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ၅ လက်မခွဲအကျယ်ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို IPS LCD Capacitive Touchscreen Display နဲ့ ဖန်တီးပြုလုပ် ပေးထားပါတယ်။ ၁လက်မအတိုင်းအတာအရဆိုရင်တော့ 401 ppi pixels သိပ်သည်းဆပမာဏကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး Emotion UI 4.1 နဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း လက်ချောင်းတစ်ချောင်းထက်ပိုကာ ထိန်းချုပ်စေခိုင်းနိုင် မယ့် Multitouch ကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အနောက်ကင်မရာက 16MP Resolution အရည်အသွေးရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ 30fps မှာ 2160p အရည် အသွေးရှိတဲ့ ဗီဒီယိုတွေကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Selfie ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ အတွက် အရှေ့ကင်မရာကလည်း 8 MP Resolution ကို အပြည့်အ၀ရရှိနိုင် မှာဖြစ်ပါတယ်။ Internal Memory 32 GB ပါရှိပြီး RAM 3GB နဲ့ 4GB ကို ပံ့ပိုးပေးထားမယ့် Version နှစ်မျိုးအပြင် Internal Memory 64GB ပါရှိပြီး RAM 4GB ကိုထည့်သွင်းပေးထားမယ့် Version ကိုပါ ခွဲခြားထုတ်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Chipset အမျိုးအစားက Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီပိုင်းမှာတော့ Non-removable Li-Po 3340 mAh Battery ကို ထောက်ပံ့ပေးထားမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Network - GSM/HSPA/LTE
CPU - Octa-Core 2.0 GHz Cortex-A53
Memory - 32, 64 GB (up to 256 GB)
OS - Android OS, v6.0
Bluetooth - v4.1, A2DP, LE
Mobile Guide Journal (Every Monday)
Posted in: Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ
A+ Learning Games (1)
Account Generator (2)
ACER ROOT (3)
Address Book Software (3)
Adobe Flash Player (5)
Adobe Products (7)
AIo Tool (1)
All Cracked Box Tools (9)
All In One Software (2)
Amdroid game (126)
Andriod Application (1298)
Andriod applications (198)
Andriod Rooting (11)
android photo (3)
Android Antivirus (49)
Android Antiviurs (24)
Android apk (20)
Android Application (2861)
Android Application ရေးနည်းများ (14)
Android Applications (369)
Android Apps (85)
Android box (1)
Android camera (43)
android email patten lock (3)
android email ဆိုင်ရာ (1)
Android Error Solution (3)
Android Facebook (53)
Android firmware (55)
Android Fix (1)
ANDROID FONT (13)
Android Fonts (4)
Android game (48)
Android Games (1307)
ANDROID HD GAMES (3)
Android keyboard (6)
Android Launcher (260)
Android Live wallpaper (101)
Android Live Wallpaper (113)
Android locker (5)
android map (1)
Android Memory Apk (1)
Android MM Keyboard (7)
Android Myanmar Font (36)
Android Page (1)
Android Photo Editors (21)
Android Programing Software (1)
android root (177)
Android Root နည်းများ (8)
android software (29)
android software dead ဖုန်းများ (3)
Android Theme (6)
Android Themes (116)
Android Tool (58)
android tools (32)
Android Video (5)
Android Virus (2)
Android wallpaper (13)
Android ဆိုင်ရာ (55)
Android နှင့် မြန်မာ Font (610)
Animation maker (7)
Asus root (18)
Audio Editor (63)
auslogic software (2)
Auto CAD (19)
Autorun Killer (2)
Barcode Maker (1)
Bootable Maker (3)
browser for Android (23)
Browsers Downloaders (1)
Business Software (26)
China Clone ROM (1)
china tablet (3)
Cleaner ဆော့ဖ်ဝဲလ် (101)
Computer Softwares (86)
Computer tips and tricks (2)
Computer နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများ (97)
CyberCafe Management (1)
cyberlink Paint (1)
Cyberlink Power DVD များ (19)
DeepFreeze Remover (2)
Design Software (63)
Digital Life ဂျာနယ် (123)
DotA Map (2)
Download speed Optimizer (1)
Download ချနည်းများ (4)
Driver Software (124)
English Language (16)
Englishလို IT နည်းပညာ Ebook (16)
Epson Resetter (1)
Error Repair (26)
File Copy Protecter (8)
Firmware တင်နည်း (6)
First Mobile Magazine (1)
Flash Maker (2)
Flash Song (7)
Free Download Manager (4)
Free VPN (5)
Funny Note(ရယ်စရာမှတ်စု) (1)
Game နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းများ (62)
Games For IOS (5)
Global Mapper (1)
GPK ဖိုင်များ Install လုပ်နည်း (1)
Gtalk Idle (1)
Hard Disk Partition (6)
Hardware အကြောင်း (1)
Hide IP (23)
Hosting Site (1)
How to Download (ဒေါင်းလုတ် လုပ်နည်း ဖတ်ပေးပါ) (2)
How to Download Apk (1)
HTC ဆိုင်ရာများ (8)
Huawei Firmware (28)
huawei network unlock (5)
huawei phone network unlock (3)
Huawei Rom (1)
HUWAEI ROOT လုပ်နည်းများ (24)
i mobile firmwares (1)
IDM ပြဿနာများ (3)
ime & basebrand ဆိုင်ရာ (14)
IMEI Fix (6)
imobile root လုပ်နည်းများ (8)
Internet Download Manager (326)
Internet Journal (110)
Internet speed up (12)
Ios Application (45)
iOs Firmwares (8)
IOS Games (21)
iOS Jailbreak (7)
iOs Tools (8)
Ios Tutorials (1)
iOs နှင့်ဆိုင်ရာ (70)
IP နှင့် ဆိုင်သော (8)
iphone Trick (12)
ISO Burner (14)
IT ဗဟုသုတ (33)
itune Generator (1)
Jailbreak Tool (2)
karaoke ဆော့ဝဲများ (4)
Kaspersky Daily Keys (3)
KASPERSKY KEYS KAV KIS (32)
Keygen. Serial Key (38)
latop batery ဆိုင်ရာ (1)
Law Ebooks (4)
Lenovo ROM (4)
LENOVO ROOT လုပ်နည်းများ (8)
LG Firmwareတင်နည်း (2)
LG ROOT လုပ်နည်းများ (7)
LINE for PC (1)
Linux Tool (4)
Making Fonts (2)
Making Money (9)
Media Player (20)
Mi Account Remove Solution (1)
Mi Root (5)
Microsoft .NET Framework (5)
Microsoft Office 2007 (2)
Microsoft Office 2010 (25)
Microsoft Office 2013 (30)
Microsoft Office Activator (51)
Microsoft Office Activetor (17)
mobile guide ဂျာနယ် (144)
Mobile Hardware Tutorials (8)
Mobile Knowledge (494)
Mobile Phone (40)
Mobile Phone security (8)
Mobile Service Online Training (1)
Mobile Software Tutorial (6)
Mobile Tutorial (79)
Mobile သတင်းရေးရာအဖြာဖြာ (2606)
monkey virus (2)
Monkey Virus Removal Tool (1)
Movie Locos (38)
MP3 Downloader (21)
MP3 Resizer (18)
MP3 သီချင်းများ (120)
mp4 songs (1)
MTK Tools (1)
Music Album (43)
Music Maker (7)
Myanmar Mobile User Guide Journal (1)
Myanmar Mobile View Journal (4)
Myanmar Music (7)
Myanmar Operating System (1)
Nero Burning (19)
NetGuide Journal (122)
New Application (1)
NOD32 Keys (19)
NTFS To FATA Converter (1)
Online Radio Player (5)
online နည်းပညာများ (8)
Oppo Firmware (3)
OPPO ROOT လုပ်နည်း (5)
Our Buddish (1)
password creator (2)
Password remover (6)
Password Revocery (16)
PC download (7)
Pc Game (54)
PC Lock (6)
PC Optimizer (26)
PC software (164)
pc tool (6)
Pdf creator (6)
PDF To All Converter (11)
PDF to Autocad (2)
Photo Editing (46)
Photo Editor (3)
Play Storeထည့်သွင်းနည်း (2)
Printer Driver (4)
Printer Resetter (2)
PSP Games (8)
Qualcomm Tools (1)
Recovery Software (139)
Registry Cleaner (27)
Ring Tones (12)
Root Tools (81)
Samsung Firmwares (46)
SAMSUNG GALAXY FRIMAWRE (6)
samsung galaxy root လုပ်နည်းများ (41)
Samsung Odin (3)
Samsung rom (1)
Samsung Rootလုပ်နည်း (48)
Samsung unlock tool (2)
Screen Capture (31)
Screen Locker (4)
Screen Saver (7)
Secret Number (1)
Selfie Camera (3)
SIM Card Recovery Software (5)
sim unlock လုပ်နည်း (1)
Skin Pack (4)
Sony Mobile (21)
SP Flash Tool (3)
Speed Up Internet (87)
Speed Up Internet for Android (4)
Speed Up PC (50)
Speed Up Window (98)
Speed Up Windoww (53)
system Control (2)
System Tool (15)
Techspace Journal (27)
tips and trick (65)
TuneUp Utilities 2012 (1)
Tutorial Videos (7)
Typing Software (9)
USB Bootable ဆိုင်ရာ (4)
USB Disk Security (28)
USB Lock (7)
USB Memory Increase (4)
viber for pc (7)
viber ဆိုင်ရာ (6)
viber မြန်မာဗား၇ှင်း (3)
Video Converter (71)
Video Editing (142)
video recording (18)
Virtual DJ (6)
Vivo Firmware (3)
vzo for mobile (1)
website လမ်းညွှန် (8)
WEBSITE လမ်းညွှန်း (2)
wifi hack boot cd (2)
WiFi hotspot (5)
WiFi Software (37)
Wiko Lenny2(2)
win 8.1 ဆိုင်ရာ (2)
Window 10 (25)
Window 10 Activator (11)
window7(74)
window7Activator (71)
window 8 (71)
window 8 Activator (74)
window 8.1 Activator (7)
Window9(2)
window Activate (7)
Window Activator (1)
Window Diver (1)
Window Loader (7)
Window Phone Applications (7)
Window Phone Games (1)
window XP (13)
window XP window 8 (3)
window XP . window 8 (1)
window XP Activator (14)
window ဆိုင်ရာနည်းပညာများ (22)
Windows7Shortcut Error (1)
Windows Browser Downloader (1)
Windows Repair (6)
windows Tweek (2)
Windows XP Activator (2)
winrar password (1)
wireless Hacking (12)
Xiaomi Firmware (23)
Xiaomi Root (35)
Your Uninstaller (10)
Zawgyi Font (19)
ZTE Root (1)
ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာများ (1)
စာရင်းအင်း Software များ (2)
နည်းပညာ ဂျာနယ် (69)
ပိဋကတ် (၃) ပုံ (5)
မြန်မာ font (12)
မြန်မာ Font Installer (4)
မြန်မာ Font များ (12)
မြန်မာ Operating System (2)
မြန်မာ့ စစ်တုရင် (1)
မြန်မာ နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် (5)
မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook (381)
ရသ - ၀တ္ထုတို (8)
ရသ ကဗျာ (22)
ရသ စကားစု (18)
ရသ စာပေ (31)
ဝက်ဆိုက်ဒ် လမ်းညွှန် (17)
အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း စာအုပ်များ (6)
► 2017 (2832)
▼ 2016 (6022)
▼ September (415)
♪ Classic Bomber 2016 Apk ♫
♪ Android ဖုန်းတိုင်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်တဲ့ T...
♪ Android ဖုန်အသုံးပြုသူတွေအတွက် သုံးနေကျ apk တွေက...
♪ ဈေးသက်သာပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် Xiaomi Mi ...
♪ ဈေးပေါပေါနဲ့ကိုင်နိုငမယ့် - “KENBO SUN E71” ♫
♪ "HTC က Desire 10 Pro နဲ့ Desire 10 Lifestyle တို...
♪ အူရီဒူးမြန်မာမှ ဆုမဲပေါင်းများစွာပါဝင်သည့် ရွှေအိ...
♪ NetGuide Journal Vol (4), Issue (53) (28.9.16) ♫...
♪ Galaxy Note7ဖုန်းတွေရဲ့ ၆၀ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ပြ...
ဖုန်းမှာ ရုပ်ရှင် Movie ဖိုင်မျိုးစုံကိုကြ...
လိပ်နင်ဂျာ ဖိုင်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး - Ninja Turtles:...
ဖုန်းမှာ Music သီချင်းတွေကို အကောင်းဆု့းနားဆင်နိုင...
ဖုန်း service သမားတွေဆောင်ထားသင့်တဲ့ - Quick Rebo...
ဖုန်းမှာတင် ဗီဒီယို edit တွေပြုလုပ်နိုင်တဲ့ - Vide...
Internet Download Manager 6.26 Build3[Just Downl...
♪ Firmware , Box Setup အစုံပါပဲ တစ်နေ့ 20GB နှုန်း...
♪ စမတ်ဖုန်းဈေးကွက်ကနေ အရှုံးပေးထွက်ခွာပြီဖြစ်ကြော...
♪ Samsung Lollipop 5.0 နဲ့ Marshmallow 6.0 တွေအတွက...
♪ Contra game For Android ♫
♪ Facebook အကောင့်ကို ခဏတာ သို့မဟုတ် အပြီးတိုင် ဖျ...
♪ iOS နဲ့ Android အတွက် Google Photos ကို အကောင်း...
♪ နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ ခရီးသွားများ၏ ခရီးသွာ...
♪ Professional Web Developer with PHP & MySQL တန်း...
♪ Android အတွက် Chrome Browser မှာ ဗီဒီယိုအရွယ်အစာ...
Myanmar iT Learning Apk
♪ Google Station Free Wi-Fi စနစ်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးအသံ...
♪ နောက်လထဲ ထွက်ရှိလာတော့မယ့် လုပ်ငန်းခွင်သုံးဖေ့စ်...
ဈေးနူန်းချိူသာပြီး အာမခံအပြည့်ဖြင့်ဝင်လာသော NIPDA...
မိမိဖုန်းထဲမှာ သီချင်းကောင်လေးတွေကို ဖုန်းမြည်သံလေ...
ကစားရတာ စိတ်ဝင်စားတဲ့သူများအတွက် New Version ဖြစ်တ...
♪ Android-Chrome OS hybrid အသုံးပြုထားသည့် laptop ...
♪ မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီတာဘီလ်ဆောင်နိုင်...
♪ Start your own e-Commerce Business သင်တန်းတက်ရော...
♪ Mobile Guide Issue Vol-3 ၊ Issue-72 (26.9.16) ♫
♪ တယ်လီနောဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား မြန်မာနိုင်ငံတ...
♪ Lenovo ၏ laptop များတွင် Linux အခြေခံ OS ကို ins...
♪ Galaxy Note7ဖုန်းသစ်တွေကို ဓာတ်မှန်နဲ့ စစ်ဆေြး...
♪ “Huawei P9” ကိုစိတ်ဝင်စားသူများလေ့လာနိုင်ဖို့ ♫
ဟန်းဆက်တစ်လုံးမ၀ယ်မှီသိထားရမည့် ၀ယ်သူဘက်မှ သဘောထား...
♪ " HTC Desire 820 Mini " Price : 289,000/- ♫
♪ iPhone အသစ်နှစ်မျိုးရဲ့ အားသာချက်အားနည်းချက်များ...
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှူဒါနအရက်ရောဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် မြန်မာသ...
♪ KENBO Hero2- Price - 139,800 Ks ♫
တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ယူနီကုတ်မြန်မာစာ စံစနစ်ကို တစ်ေ...
♪ Google Fiber ထက် အဆ ၁,၀၀၀ မြန်ဆန်သော အင်တာနက်ကို...
♪ Agent of Duty Crime Mission game ♫
CCleaner 5.22.5724 Latest Version [Just Download &...
♪ LG Stylus2" Price : 295,000/- ♫
ဈေးနူန်းချိူ သာ အာမခံချက်အပြည့်ရှိပြီး ထူးခြားချက...
♪ “Samsung Galaxy A3 (2017)” ♫
♪ Telenor Group survey – ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်း...
♪ အရောင်အသေွး စုံလင်စွာရနိုင်တဲ့ Singtech Sapphire...
Back,Home,Menu ခလုတ်တွေမကောင်းခဲ့ရင် Simple Contro...
ဖုန်းတွေမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ - Call Recor...
♪ တယ်လီနော ဆင်းကတ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ...
လေးနေတဲ့ဖုန်းကို ပေါ့ပါးသွက်လက်စေမယ့် - Fastest Cl...
ဘက်စကပ်ဘော ဆော့ကစားနိုင်မယ့် - NBA 2K17 v0.0.21 Ap...
ဖုန်း Launcher ဒီဇိုင်းအလန်းစားလေး - Cold Launcher...
ဖုန်းမှာ Movie ဗီဒီယိုတွေ ရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်း နဲ့...
♪ Snapshot ဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးနိုင်မယ့် Snapchat ရဲ...
ကားပြိုင် မောင်း ဂိမ်းကောင်းလေး - Real Racing3v4...
♪ Digital Life Journal Issue Vol-5 ၊ Issue 20 (26....
VideoShow Pro (Video Editor apk)
♪ HTC 10 ကို ဆက်ခံမယ့် ဖုန်းသစ် HTC Bolt ရဲ့ ပုံရိ...
သီချင်း ဗီဒီယိုတွေကို ပုံစံ ၁၀မျိုးနဲ့ နားဆင်နိုင်...
♪ ပျော်ရွှင်စရာဟာသ Video များကိုကြည့်ရှူ့နိုင်မဲ့ေ...
♪ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများအတွက် Contact များကို...
♪ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့ဖူးတဲ့ တင့်ကားဂိမ်း - Super ...
♪ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူများကြား Restart & Reset ...
ဖုန်းမှာတင် ပုံတွေကို ဟာသ စာသားရေးပြီး ပုံအလန်းတွေ...
ဖုန်းမှာတင် ရုံးသုံး ဆော့ဝဲတွေသုံးနိုင်မယ့် - Off...
♪ Samsung Firmware များကို account မလို Resume လည်...
ဖုန်း music အလန်းစားလေး - n7player Music Player Pr...
ဖုန်းမှာ Icon ဒီဇိုင်းအလန်းလေးနဲ့လန်းနိုင်မယ့် - R...
အက်ရှင် အပစ်အခက် ဂိမ်းကောင်းလေး - Deus Ex: The Fal...
ကားသူခိုးဂိမ်းထက် ပိုဆော့လို့ကောင်းတဲ့ - Gangstar ...
♪ “Microsoft က Desktop Apps များကို Windows Store ...
♪ “HTC Desire 728” ♫
♪ iOS 10 မှာ pokemon go ကို hack ပြီးဆော့နည်း(no j...
♪ " သတင်းပေါက်ကြားမှုများအရ Xiaomi Mi5S တွင် Qualco...
♪ " Windows 10 ပေါ်မှာ Linux သုံးမယ် " ♫
♪ " BLU မှ Vivo 5R ကို ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီဟု သိရှ...
♪ အိန္ဒိယ ဈေးကွက်အတွက် Z2 Plus ကို Lenovo မိတ်ဆက် ...
♪ တရားဂါထာတော်များ - Application ♫
♪ “Unlocked Phone သုံးသည့်အခါ” ♫
♪ “KENBO Hero 2” ♫
♪ e-Government နှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ...
♪ Google ရဲ့ဖိုက်ဘာဆက်ကြောင်းထက် အဆ၁၀၀၀ ပိုမိုမြန်...
♪ RAM 6GB ပါဝင်ပြီး၊ ၃.၅မီလီမီတာနားကြပ်ပေါက်မပါဝင်...
egg - Action Selfie Cam APK
ဒီနေ့ထွက် - Facebook Messenger and Facebook new 9/...
♪ Samsung Korea model တွေမှာ internet မဖွင့်ပဲပွင်...
♪ “Samsung ရဲ့ Galaxy C9 လာမည်” ♫
♪ Facebook ကို ကျင်လည်စွာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် နည်းလမ...
♪ 080p screen နှင့် 16MP ကင်မရာ ပါဝင်သည့် BLU Life...
♪ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု မလိုဘဲ Message ပေးပို့နိုင်တဲ...
♪ Marcus မှ Pantech V955 စမတ်ဖုန်းအား အထူးလျှော့စေ...
► 2015 (4462)
► 2014 (4314)
► 2013 (3278)
လောကဇာတ်ခုံ၊ ဤလူ့ဘုံ၌ မျိုးစုံကကြ ၊ မာန်မာနနှင့် ငါကရာဇာ ၊ ငါဟာသူဌေး ၊ ငါပဂေးဟု ငါသွေးတက်ကြွ ၊ လူ့ဗာလတို့ များလှဖြာဖြာ ၊ အဝိဇ္ဇာနှင့် တဏှာဘီလူး ၊ အမှောင့်ပူး၍ ကျူးကျူးကျော်ကျော် ၊ ဂုဏ်ကိုဖေါ်လျက် မော်မော် မောက်မောက် ၊ ငါတစ်ယောက်သာ မိုးအောက်တလွှား ၊ရွှေကိုယ်လားဟု ထင်မှားမလွဲ ၊ သို့စဉ်စွဲလည်း ဇာတ်ပွဲပြီးက ၊ ပြည်ဖုံးချသော် သုဘရာဇာ ၊ မြေအောက်မှာပင် ဘာသာလူမျိုး ၊ ချိန်မထိုးပဲ ပုတ်သိုးခန္ဓာ ၊ မြုပ်ရရှာသည် ဘယ်မှာ ငါဟု ရှိအံ့နည်း။ (လယ်တီဆရာတော်ကြီး)
ဝင်းကမ္ဘာကျော်(နည်းပညာမှတ်တမ်း) လေးဆီကို နည်းပညာတွေလေ့လာဖို့ ရောက်လာတဲ့သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ အားလုံး ထာဝရ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ